Kepler-10 - ဝီကီပီးဒီးယား
An artist's depiction of the Kepler-10 system. Kepler-10c is in the foreground.
19° 02′ 43.0612″
+50° 14′ 28.701″
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: 2998816060000000000♠−18.394±0.045 mas/yr
Dec.: 7001414480000000000♠41.448±0.046 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 5.3618 ± 0.0233 mas
အကွာအဝေး ၆၀၈ ± ၃ ly
(၁၈၆.၅ ± ၀.၈ pc)
ဒြပ်ထု 0.910 ± 0.021 M☉
အချင်းဝက် 1.065 ± 0.009 R☉
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 5708 ± 28 K
စတီလာ သက်တမ်း 10.6+1.5
ကပ်ပလာ မှတ်တမ်းရေးရာ data
Kepler-10 သည် ဒရကို ကြယ်စုတန်းရှိ နေနှင့်တူသော ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၆၀၈ ကွာဝေးသည်။ ယင်းအား နာဆာမှလွှတ်တင်ထားသော ကပ်ပလာ အာကာသ တယ်လီစကုပ်မှ လေ့လာခဲ့သည်။ ကြယ်သည် သက်တမ်းအားဖြင့် ၁၀.၄ ဘီလီယံနှစ်ရှိပြီး နေထက် အနည်းငယ်ပိုကြီးကာ အပူချိန်မှာ အနည်းငယ်အေးမြသည်။ Kepler-10 တွင် ပနည်းဆုံး ဂြိုဟ်နှစ်စင်းတည်ရှိပြီး Kepler-10b နှင့် Kepler-10c တို့ဖြစ်ကြသည်။ Kepler-10b သည် မိခင်ကြယ်အား ၀.၈ ရက်ကြာတိုင်း တစ်ပတ်နှုန်းဖြင့် လှည့်ပတ်ပြီး Kepler-10c မှာ ၄၂.၃ ရက်ကြာတိုင်း တစ်ပတ်နှုန်းဖြင့် လှည့်ပတ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ရသော မာကျူရီဂြိုဟ်သည် နေကို ၈၇.၉၇ ရက်လျင် တစ်ပတ်နှုန်း လှည့်ပတ်သည်။ Kepler-10c သည် ကမ္ဘာထက် အချင်းဝက် ၂ ဆနီးပါး ပိုကြီးပြီး သိပ်သည်းဆလည်း ပိုများသည်။ ယင်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အရ ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှ နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက်ရှိ ဂြိုဟ်များထဲတွင် အကြီးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
b 3.33±0.49 M⊕ 0.01684 0.837495084.8+3.2
−1.19 M⊕ 0.2410 45.29485089.59+0.25
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties" (August 2018). Astronomy & Astrophysics 616. doi:10.1051/0004-6361/201833051. Bibcode: 2018A&A...616A...1G. Gaia Data Release2catalog entry
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ "The Kepler-10 Planetary System Revisited by Harps-N: A Hot Rocky World andaSolid Neptune-Mass Planet" (2014). The Astrophysical Journal 789 (2): 154. doi:10.1088/0004-637X/789/2/154. Bibcode: 2014ApJ...789..154D.
↑ Notes for star Kepler-10။ Extrasolar Planets Encyclopaedia (2011)။ 21 January 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kepler-10။ SIMBAD။ Centre de données astronomiques de Strasbourg။ 2011-02-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA'S Kepler Mission Discovers Its First Rocky Planet။ Ames Research Center။ NASA (10 January 2011)။5March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Kepler-10c, A 2.2-Earth Radius Transiting Planet In A Multiple System" (2011). The Astrophysical Journal Supplement Series 197. doi:10.1088/0067-0049/197/1/5. Bibcode: 2011ApJS..197....5F.
↑ Clavin၊ Whitney (June 2, 2014)။ Astronomers Confounded By Massive Rocky World။ NASA။ June 3, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Summary Table of Kepler Discoveries။ NASA (2011)။ 1 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ကိုဩဒိနိတ်: 19h 02m 43s, +50° 14′ 28.7″
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepler-10&oldid=687803" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။